Thwebula Amazon Kindle 4.16.0.75 isizulu – Android – Vessoft
Amazon Kindle – a software ukufunda izincwadi, omagazini namaphephandaba enkampanini Amazon. Isofthiwe ikuvumela ukubuka futhi ukuthenga izincwadi noma ezinye imibhalo ngobukhulu encwadini esitolo. Amazon Kindle iqukethe isichazamazwi esakhelwe eyenza ukubuka kwencazelo yegama elithi egqanyisiwe enkonzweni Wikipedia noma eminye imithombo ulwazi in the internet. Amazon Kindle isekela ukuvumelanisa i-akhawunti evumela ukuthi wena ukufunda izincwadi ezivela isitoreji endaweni yakamuva kumadivayisi ezahlukene. Isofthiwe kwenza ukuba ulungise ukukhanya kwesikrini, usayizi wefonti, umbala kanye page orientation. Amazon Kindle futhi ikuvumela ukuba adale umtapo wakho siqu futhi bathole izincwadi noma ezinye imibhalo ezigabeni ezahlukene.
Bonisa futhi uthenge izincwadi ezivela service Amazon
Synchronizations of the akhawunti
Amasethingi of the ifonti ukukhanya page
English, Español, 中文, Português... ES File Explorer 4.0.4.7